China LBB Tattoo Inaliti iCartridge kunye nokwenziwa ndizayo ethambileyo kunye Factory | MOLONG
1) Iikhatriji zeenaliti ezintsha eziGreen, iicartridge ze tattoo ezikumgangatho ophezulu
2) Iyahambelana nobungakanani beekhatriji ezinkulu kunye noomatshini kwintengiso
3) Yenziwe ngentsimbi engenasici. Inwebu yokhuseleko ngaphakathi kwenkqubo
I-4) I-EO yangaphambi kokubola kwaye ipakishwe kwiipakethi zeblasta ezingenazintsholongwane
I-5) Indlu yeprofayile esezantsi kunye nokuhamba okungcono kwe-inki kunye nokumila ngaphakathi
I-6) Pre-sterilized nge-ethylene oxide gas
7) Yenziwe kwi-CE, i-ISO-9002 kunye ne-EN
Kutheni uthenga izinto ngexabiso eliphantsi kuthi?
Eyona ndawo ihamba phambili kwiStock
Eyona Nto iQhelekileyo yokuThengisa njengeyona nkampani iphambili ethengisa ukuthengisa, sinikezela ngaphezu kwe-100 lamawaka wentengiso ekumgangatho ophezulu kunye neemveliso zegama elidumileyo, konke ngamaxabiso apheleleyo. Amava enkonzo yobungcali kunye neemveliso ezisemgangathweni ezenziwe China namhlanje.
Ukubhalisa kuthatha kuphela imizuzwana kwaye simahla, emva koko uya kuba nenqwelomoya entsha entsha yokuthenga ukuze ugcwalise ngayo nantoni na oyifunayo! Into ekufuneka uyenzile yidilesi ye-imeyile efanelekileyo. Qala ukuthenga kwi-Intanethi kwaye ubambe izisulu namhlanje!
Akukho Odolo zincinci
Uninzi lweemveliso zethu kwiwebhusayithi yethu azinazo iimfuno zodolo zincinci, ke unokuthenga iimveliso zentengiso ngalo naliphi na inani njengoko ufuna! Abathengisi banokuthenga iodolo enkulu kwaye bonwabele amaxabiso aphakathi! Bhrawuza uluhlu lwethu olukhulu lweemveliso ngoku kwaye uzibonele.
Ukuhanjiswa okukhawulezayo kwayo yonke iVenkile yethu yeShishini
Sisebenzisa i-DHL, i-FEDEX, i-UPS kunye ne-EMS ukuthumela zonke iipakeji zethu. Ukusuka kwiLuckybuybox'Indawo yokugcina kwindawo ezinkulu eMntla Melika, eYurophu nase-Australia, ukuhambisa kuphela kuthatha iintsuku ezi-3 ukuya kwezi-6. Myalelo namhlanje kunye nokuphumla kulula!
Unoku-odola iimpahla kwiwebhusayithi yethu ngokuthe ngqo. Samkela ukhetho olukhuselekileyo lokuhlawula i-PayPal. Siyayamkela intlawulo yeBhanki kunye nentlawulo yeNtshona Union. Qalisa namhlanje! Ukuthenga okuKhuselekileyo kwi-Intanethi
Ukhuseleko yeyona nto iphambili kwi-Luckybuybox.com. Siqinisekisa ukhuseleko lwayo yonke idatha yokuthengiselana ngokusebenzisa umboneleli wesisombululo sokhuseleko, hlala ukhuselekile kwi-Intanethi nathi.
Egqithileyo Uhlobo olutsha lweLitum yebattery pen
Okulandelayo: Yomeleza isihlanu kunye nesixhenxe seedraw ze tattoo isixhobo senqwelo / isixhobo se tattoo kwikhabhathi yesixhobo seenqwelo zesixhobo sekhabhathi
Ukutshintshwa kweTattoo Cartridge Grip
Iinaliti zeCartridge ezinembrane
Umatshini weCartridge Rotary Tattoo
ICartridge Tattoo Gun
Umatshini weCartridge Tattoo
Inaliti yeCatridge Tattoo
Ukulahleka kweTattoo Cartridge eQhelekileyo
Ukulahleka kweTattoo Cartridge Grip
Banokubhala Tattoo Inaliti iCartridge
Iinaliti zeCartridge yoLuhlu
Iikhatriji zoMzobo weTatoo
Iinaliti kunye neekhatriji
ICartridge yeNaliti engenazintsholongwane
Itattoo Cartridge Ukubambelela
Umenzi weTattoo Cartridge
ICartridge yeCattoo Grip
ICartridge Yenaliti yeTattoo
Iikhatriji zeenaliti zeTattoo ezinembrane
Umatshini wePoseidon II oMncinci weTattoo Pen
Umgangatho ophezulu weepatheni eziqingqiweyo zoMbane weTattoo ezingezizo ...
Ingcali yeTattoo Kit egqibeleleyo eneRotary Ma ...
Umatshini wokuloba weTattoo Pen, 22 * ​​25 iimoto ezingenasiseko